Usoro Kachasị Mma B2B Azụmaahịa | Martech Zone
Ebumnuche Azụmaahịa B2B kachasị dị irè
Tọzdee, Nọvemba 6, 2014 Wednesday, November 5, 2014 Douglas Karr
Anyị ekekọrịtala 2015 B2B Ihe Odide Ahia, Budget na Trends Yana usoro ahia ahia kacha ewu ewu jiri ndị ahịa B2B. Mana kedu usoro atụmatụ azụmaahịa B2B kachasị dị irè?
Dị ka ọmụmụ ahụ si kwuo, ihe nzuzo maka ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa ọdịnaya bụ ịdepụta usoro ọdịnaya gị ma rapara na ya. O kpughekwara na ndị na-ere ahịa ọdịnaya na-emepụtawanye ọdịnaya mana ha ka na-agbasi mbọ ike soro ROI, ọkachasị mgbe ha anaghị ede usoro ha. Ị nwere ike gụọ akụkọ zuru ezu maka nchoputa zuru ezu. Francois Matheiu, Uberflip
Fọdụ n'ime isi ihe ndị anyị kwenyere ma na-ahụ ndị ahịa anyị:
infographic ojiji na budata ụba. DK New Media emeela ọtụtụ edepụtara na ọtụtụ n'okpuru mmepe maka ndị ahịa anyị.
Ihe omume n'ime mmadụ dị irè dị egwu, webinars na vidiyo na-ekpuchi ya.
LinkedIn na-aga n'ihu na-abụ ihe enyemaka kachasị dị irè maka ojiji mgbasa ozi mmekọrịta.
Ịmepụta, emepụta na e ji atụ irè nke ahịa ọdịnaya na-aga n'ihu na-abụ isi nsogbu.
Tags: b2b blọọgụọmụmụ ihe b2bb2b ọdịnaya ọdịnayab2b ahia ahiab2b ihe omumeozi b2bvidiyo vidiyo b2bb2b elekọta mmadụ mediavidiyo b2bb2b websaịtịB2b webinarscontent Marketinguberflip
Bilie Ọdịnaya Gị Bipụtara Ngwa ngwa na Atụmatụ Nhazi Foto ndị a
Nov 7, 2014 na 10:03 AM
Daalụ maka ịkekọrịta infographic Uberflip, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ mgbe ọ bụla ịpụta ya na TechBlog Marketing!